🥇 kaonty amin'ny birao nify
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 145
Lahatsary momba ny kaonty amin'ny birao nify
Mandidia kaonty momba ny biraon'ny mpitsabo nify
Tena ilaina tokoa ny kaontin'ny biraon'ny nify! Ny birao automatique nify dia manokatra lisitry ny fahafaha-manao vaovao ho an'ny manam-pahaizana manokana rehetra! Ny rindrambaiko fitantanana biraon'ny nify dia manohana ny fitantanana kaonty, fitantanana ary koa ny fanaraha-maso ny lisitra. Mpampiasa maro no afaka miasa ao amin'ny rafitra fitantanana kaontin'ny nify indray mandeha. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny fizarana ny kaonty fitantanana ny kaonty nify 'Audit', azonao atao foana ny mahita hoe iza amin'ireo mpampiasa no nanampy an'io na ireo rakitsoratra na mamafa azy. Miaraka amin'ny fanampian'ny programa kaonty amin'ny asan'ny biraon'ny nify, ny mpandray mandray dia afaka manaiky haingana ny fandoavam-bola. Ny fandoavana dia azo atao mifanaraka amin'ny lisitry ny vidiny manokana; mety ho lisitry ny vidiny ankapobeny na lisitry ny vidiny misy fihenam-bidy na bonus. Ny programa fanaraha-maso sy fitantanana kaonty momba ny nify dia manome fampiasa samihafa ho an'ny mpitantana, mpitsabo nify ary teknisiana, satria ny tsirairay amin'izy ireo dia miasa amin'ny faritra misy azy manokana. Ankoatr'izay, ny programa momba ny kaontin'ny fiasan'ny biraon'ny nify dia azo namboarina tsirairay isaky ny andrim-panjakana: azonao atao ny mametraka ny sary famantarana ny tobim-pitsaboana eo am-baravarankely, ny anaran'ny biraon'ny nify amin'ny lohatenin'ny programa fitantanana kaonty ary mametraka anao manokana lohahevitra interface. Azonao atao ny mizatra tsy miankina amin'ny programa momba ny kaonty amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny biraon'ny nify. Mba hanaovana izany dia ampidino avy amin'ny tranokalanay ny kinova demo ary manomboha! Ho tianao ny programa fitantanana kaonty amin'ny biraon'ny nify, azonao antoka izany! Miasa amin'ny biraon'ny nify dia lasa tsotra sy mora.
Ny fahamendrehana eo amin'ny biraon'ny nify dia azo antoka noho ny fampiharana kaonty. Amin'ny raharaham-barotra, ny toe-javatra force majeure dia mahazatra. Mety harary ny mpitantana iray, ary mifamatotra aminy ny fifandraisana rehetra amin'ny marary; mpiasa iray miaraka amin'ny data rehetra dia nametra-pialana indray andro ary tsy nanam-potoana hampitana ny vaovao rehetra amin'ny hafa; tsy misy dikany ny manadino fotsiny ny fahaverezan'ny an'ity na ilay fampahalalana. Fiantohana ny fizotran'ny asa aman-draharaha miantoka ny toe-javatra toy izany. Ny fampahalalana rehetra dia voarakitra ao amin'ny programa kaonty momba ny fanaraha-maso ny biraon'ny nify, voafehy tsara ary napetraka ny fizotrany, ny tahirin-kevitra momba ny marary sy ny tetik'asa dia voatahiry ao amin'ny fangatahana kaontinao. Tsy tapaka ny fitokisana na dia ampidirina ao anatin'ilay dingana aza ny mpiasa vaovao. Izy dia afaka mahazo ny tantara rehetra ao amin'ny tahiry, ary ny programa kaonty fitantanana ny biraon'ny nify dia mandrisika ireo dingana ary tsy mila fotoana be loatra ny fampiofanana. Mba hahazoana antoka fa amin'ny ho avy, ny fandaharam-potoanan'ny dokotera dia tsy 'hitambatra' amin'ny fandaharam-potoana, ary ny mpandrindra dia afaka manoratra mora foana ny marary, mamporisika anao izahay hametraka loko isan-karazany ho an'ny dokotera tsirairay. Mba hanaovana izany, kitiho ny 'Change color', safidio ilay tadiavina, tsindrio indray mandeha miaraka amin'ny bokotra totozy ankavia ary hamafiso ny safidinao amin'ny fipihana 'OK'. Raha manana dokotera marobe ny tobim-pahasalamanao noho ny loko ao amin'ny programa fitantanam-bola amin'ny fitantanana ny biraon'ny nify, azonao atao ny manome loko iray amin'ny dokotera maromaro - ohatra, ireo izay tsy miasa amin'ny andro iray. Raha manana tobim-pahasalamana misy rantsana ianao ary miaraka amin'izay koa ny angon-drakitra marary mahazatra, dia hiseho koa ny saha fanampiny izay tsy maintsy hamaritanao ny sampana (na sampana) iasan'ny mpiasa. Aorian'ny fampidirana ny angona ilaina rehetra, tahirizo ny karatry ny mpiasa sy ny fanovana rehetra ao.
Miaraka amin'ny fanampian'ny tatitra, ny tale na ny mpitantana dia afaka mamakafaka ny raharaham-pirenena ao amin'ny biraon'ny nify nefa tsy misy teboka manan-danja. Mba hahazoana fampahalalana ao anatin'ny segondra vitsy momba ny fitsaboana narotsaka androany ary hatramin'ny fiandohan'ny volana, ohatrinona ny vola naloan'ny faktiora, izay nitarihan'ny dokotera ny sandan'ny faktiora, firy ny marary vaovao niseho hatramin'ny voalohany amin'ny volana, ny hakitroky ny rakitsoratra ho an'ny andro sy herinandro ho avy, mankanesa any amin'ny tatitra manokana. Ho an'ireo manampahaizana manokana manana ny andraikitry ny 'Tale' dia misokatra izany rehefa manomboka ny programa fitantanam-bola amin'ny fitantanana ny biraon'ny nify ianao. Ho hitanao ny sehatra iray mizara fizarana misy sary sy isa - ireo dia tatitra momba ny famintinana ireo mari-pamantarana lehibe ao amin'ny klinika. Ny tatitra 'Patients' dia ampiasaina hampizarazara ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny masontsivana isan-karazany, toy ny taona, ny lahy sy ny vavy, ny adiresy, ny isan'ny fanendrena, rehefa natao ny voalohany, ny fitsaboana, ny kaontin'ny kaontinao manokana, ny fomba nahitan'izy ireo momba ny toeram-pitsaboana. , sy ny sisa. Amin'ity tatitra ity dia azonao atao ny manara-maso ny marary rehetra, ao anatin'izany ireo izay tsy nitsidika ny tobim-pahasalamanao hatry ny ela, ary manao fifandanjan-kevitra amin'ny fizarana SMS (raha manana fifanarahana amin'ny SMS-centre ianao) miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fampiroboroboana sy tolotra manokana.
Ny tatitra 'Discount' dia natao hamakafaka ny asan'ny fihenam-bidy - miaraka daholo sy tsirairay avy. Manokana, hanarahana ny fihenam-bidy rehetra avy amin'ny mpiasa, hahitana hoe faritra iza no nahazo fihenam-bidy bebe kokoa hahafantarana raha very vola ianao noho izany sy ny sisa. Miaraka amin'ny tatitra 'Volavolan-dalàna sy fandoavam-bola' dia azonao atao ny mahita ny petra-bola rehetra, ny kaonty tsy mihidy, manara-maso ny famerenam-bola amin'ny marary, ary jereo tsara ny vola nanaovana ny fandoavam-bola. Miaraka amin'ny tatitra 'Services Provided' dia ahitanao ny fampahalalana momba ny serivisy rehetra omena, jereo raha toa kajiana tsara ho an'ny marary izy ireo, ary fakafakao ny vidin'ny fitsaboana nify manokana.
Ny programa an'ny ekipan'ny USU-Soft an'ny matihanina matihanina dia manolotra fotoana be dia be ho an'ny fampandrosoana ara-pitsaboana. Ampiasao ireo fotoana mety ireo ary mitondra filaminana any amin'ny toeram-pitsaboana.